Golaha Shacabka oo Kalfadhigiisa 4-aad ku dhameystay khilaaf iyo ismari waa’ – Kalfadhi
Golaha Shacabka, oo bishan hal maalin uun kulmay, ayaa inuu maalin kale oo bishan ka mid ah si caadiya u kulmo u haysta fursad 2 maalin ah oo kaliya: Sabti iyo Isiin. Waxa u bilaaban doona sanad cusub, isaga oo sanadkan tagaya, markii uu furtya Kalfadhigiisa 4-aad, inta badan ku qaatay khilaaf waqtigii ka lumiyey, kaasoo ilaa iyo hadda haysta.
Marka laga soo tago inuu bishan oo dhan hal maalin oo kaliya kulmay, xitaa bishii hore waxaa hareeyey khilaaf hor istaagay inuu Goluhu kulmo. Kulanka Kalfadhiga 4-aad ee Golaha ayaa markii uu furmayba ku af-bilaabay ismari waa’ ku saabsanaa amniga dalka, oo ay Xildhibaanno badan ku tilmaameen inuu halis ma quurtay, halka ay kuwa kale arrintaas eeddeeda ka difaacayeen Xukumadda.
Bishaan oo kaliya, waxa uu Goluhu maalinkii 9-aad baajinaya kulanka 31-aad oo ay ahayd inuu dhaco 7-dii bishan. Khilaaf ka bilowday War-bixin uu Guddiga Maaliyadda ee Goluhu ka sameeyey Miisaaniyadda 2018-ka oo uu Guddigu ku kala jabay, Xukumadduna diiday, Guddoonka Goluhuna ku kala qeybsamay ayaa sal u ah qabsoomid la’aanta Kulanka Golaha.
Hase ahaatee ismari waa’ga arrinkaas waxa uu lugaha la sii galay khilaafyo kale, ilaa ay Guddoomiyaha Golaha Shacabku is qabtaan Xukumadda, kadib markii uu ka hor yimid ciidan ay u dirtay Baydhabo, kadibna ay xirtay Mukhtaar Roobow, oo musharrax u ahaa Xilka Madaxweynaha KGS, waxaana xaaladda sii adkeeyey Mooshinkii ka dhanka ahaa Madaxweynaha, ee markii dambe buray.
Sida ay Xildhibaanno ka tirsan Golaha, oo ay ku jiraan Xubno ka tirsan Guddiga Maaliyadda, u sheegeen Kalfadhi, waxaa hadda uu Goluhu u kulmi la’yahay Guddoonka oo isku diiddan inuu Guddiga Maaliyadda shaqeeyo. Guddoomiyaha Goluhu waxa uu Guddigaas u fasaxay inuu sii shaqeeyo, Kuxigeennadiisuna waa ka soo horjeedaan, waxaana meesha ku lamaanan in haddii uu Guddigu shaqeeyo ay soo cusboonaaneyso arrinta War-bixintii Miidaaniyadda 2018-ka, oo uu khilaafku ka bilowday.
Inkasta oo aysan Xukumaddu diidin, ogolaanna, haddana tiro aan yareen ayey Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabku ku eedeeyeen iney faragalin ku hayso shaqadooda. Sababtaas darteed ayeyna uga dhigaan daliil inuu Goluhu isla heli waayo lugaha, si ay u socoto shaqada dowladnimada.
Waxaa curanaya 2019, iyadoon Baarlamaanku ansixin miisaaniyaddiisa, waxaana dhamaanaya 2018, iyadoon Baarlamaanku meel-marin xisaab-xirka miisaaniyaddiisa. Islamarkaana, waxaa Golaha ku ag caariyeysanaya Hindise Sharciyeedyo ay ahayd inuu mar hore meel-mariyo, dibna u eego kuwa ka soo laabtay Aqalka sare, si uu ugu gubiyo Madaxweynaha oo markuu saxiixo ku soo saari doona faafinta rasmiga ah, si ay u noqdaan Xeer sharciya.